ဝယ်ပါ။ 12 X 24 လက်မ ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ - Art_Matt-130-D1 - ကြွေပြားများ ဈေးနှုန်းနှင့် ဒီဇိုင်း | ကြွေပြားအရောင်းဆိုင်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကြွေပြား-ကြွေပြားနှင့်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း တိုက်ရိုက်စျေးကွက်. Google Play တွင် ရယူပါ။ ၎င်းကို App Store တွင်ရယူပါ။
လော့ဂ်အင် / မှတ်ပုံတင်ပါ။
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ
Granite၊ Stone & Quartz
ကားပါကင် ကြွေပြားများ (Ivory Terracotta)
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ
Nano Vitrified ကြွေပြားများ
One Piece Basin ၊
Table Top Wash Basin ၊
300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ) ကြွေပြားများ
အိပ်ခန်း ,ရေချိုးခန်း ,ဧည့်ခန်း
TileView တွင် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ကြွေပြားများ တင်ပို့သည့် နိုင်ငံများ၊
အရွယ်အစား 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
ယူနစ် စတုရန်းမိုင် Mtr
တစ်ကွက်လျှင် ကြွေပြားများ 5
အရွယ်အစား (MM) 300 X 600 MM ကြွေပြားများ
အရွယ်အစား (လက်မ) 12 X 24 လက်မ ကြွေပြားများ
အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) 30 X 60 စင်တီမီတာ ကြွေပြားများ
အရွယ်အစား (ခြေဖဝါး) 1 X2ခြေဖဝါး ကြွေပြားများ
ကျန်းမာပါစေ။ & အန္တရာယ်ကင်းတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြွေပြားများကို သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဒြပ်စင်များနှင့် ရရှိနိုင်သော အကောင်းဆုံး ရွှံ့စေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် Formaldehyde၊ Volatile Organic ဒြပ်ပေါင်းများ သို့မဟုတ် polyvinyl chloride ကဲ့သို့သော မည်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများမှ ကင်းစင်ပြီး ၎င်းကို သင့်နေရာအတွက် ဘေးကင်းပြီး ကျန်းမာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် သိပ်သည်းမှုနှင့် ခိုင်ခံမှုအတွက် အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းမှုရှိပြီး ယင်းဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ကြွေပြားများသည် ခြစ်ရာများ၊ အစွန်းအထင်းများ သို့မဟုတ် အစွန်းအထင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေစိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေပြားများသည် ၎င်း၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ အနည်းငယ်မျှသာ လိုအပ်ပါသည်။.
အသွားအလာအမျိုးမျိုးနှင့် လေးလံသောခြေရာခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မြှင့်တင်ထားသောကြွေပြားများ၏သိပ်သည်းဆသည် တာရှည်ခံမှုနှင့် တာရှည်သက်တမ်းကိုသေချာစေသည်။ ရေနှင့်အခြားရာသီဥတုအခြေအနေများကိုဆန့်ကျင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေပြားများ၏မစိုစွတ်သောသဘောသဘာဝသည်ပိုမိုခက်ခဲစွာဝတ်ဆင်နိုင်သောထုတ်ကုန်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်.
Tile Specs လမ်းညွှန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များနှင့် ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် အကွက်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အသင့်တော်ဆုံး ကြွေပြားခင်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကို အခက်တွေ့စေပြီး အဆင်ပြေပြေ ဝယ်ယူနိုင်စေပါသည်။.
ကြွေပြားများ ပြီးပြည့်စုံသော တပ်ဆင်မှုသေချာစေရန် ဝယ်ယူမှုတိုင်းတွင် တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်ကို ပေးထားသည်။ ကြွေပြားများ မှန်ကန်ပြီး မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ခြင်းသည် ၎င်း၏ တာရှည်ခံမှုကို သေချာစေပြီး အက်ကြောင်းများ သို့မဟုတ် အခြားဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။.
သုံးပါ။ & ပြုစုစောင့်ရှောက်လမ်းညွှန်
သုံးပါ။ & ပြုစုစောင့်ရှောက်လမ်းညွှန် ကြွေပြားများကို မည်ကဲ့သို့အသုံးပြု၍ ပြုစုစောင့်ရှောက်သင့်သနည်း၊ သက်တမ်းပိုရှည်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ချမှတ်ထားသည်။ ကြွေပြားများ၏ အရောင်တောက်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရန် အခြေခံအကျဆုံး လမ်းညွှန်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။.
အယ်လ်ဘေးနီးယား, အယ်လ်ဂျီးရီးယား, အမေရိကန်ဆာမိုအာ, အန်ဒိုရာ, အင်ဂိုလာ, Anguilla, အန္တာတိက, အန်တီဂွာနှင့် ဘာဘူဒါ, အာဂျင်တီးနား, အာမေးနီးယား, Aruba, သြစတြေးလျ, သြစတြီးယား, အဇာဘိုင်ဂျန်, ဘဟားမား, ဘာရိန်း, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘာဘေးဒိုးစ်, ဘီလာရုစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဘေလီဇ်, နင်, ဘာမြူဒါ, ဘူတန်, ဘိုလီးဗီးယား, ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား, ဘော့ဆွာနာ, Bouvet ကျွန်း, ဘရာဇီး, ဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေ, ဘရူနိုင်း, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဘာကီနာဖာဆို, ဘူရွန်ဒီ, ကမ္ဘောဒီးယား, ကင်မရွန်း, ကနေဒါ, ကိပ်ဗာဒီ, ကေမန်ကျွန်းများ, ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊, ချဒ်, ချီလီ, တရုတ်, ခရစ္စမတ်ကျွန်း, ကိုကို့စ် (Keeling) ကျွန်းစုများ, ကိုလံဘီယာ, ကွန်မိုရို, ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ, ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, Cook ကျွန်းများ, ကော့စတာရီကာ, Cote DIvoire (အိုင်ဗရီကို့စ်), ခရိုအေးရှား, ကျူး, ဆိုက်ပရပ်စ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဒိန်းမတ်, ဂျီဘူတီ, ဒိုမီနီကာ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, အရှေ့တီမော, အီကွေဒေါ, အီဂျစ်, အယ်လ်ဆာဗေဒို, အီကွေတိုရီရယ်ဂီနီ, အီရီထရီးယား, အက်စ်တိုးနီးယား, အီသီယိုးပီးယား, ဩစတေးလျ၏ ပြင်ပနယ်မြေများ, ဖော့ကလန်ကျွန်းများ, ဖာရိုးကျွန်းစုများ, ဖီဂျီ, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ပြင်သစ်ဂီယာနာ, ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား, ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေများ, ဂါဘွန်, ဂမ်ဘီယာ, ဂျော်ဂျီယာ, ဂျာမနီ, ဂါနာ, Gibraltar, ဟေ, ဂရင်းလန်း, Grenada, ဂွတ်, ဂူအမ်, ဂွါတီမာလာ, Guernsey နှင့် Alderney, ဂီနီ, ဂီနီဘစ်ဆော, ဂိုင်ယာနာ, ဟေတီ, Heard နှင့် McDonald ကျွန်းများ, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, ဟောင်ကောင်, ဟန်ဂေရီ, လန်, အာဖဂန်နစ္စတန်, အင်ဒိုနီးရှား, အီရန်, အီရတ်, အိုင်ယာလန်, အစ်, အီတလီ, ဂျ, ဂျပန်, ဂျာစီ, ဂျော်ဒန်, ဇတ်, ကင်ညာ, ကီရီဘာတီ, မြောက်ကိုရီးယား, ကိုရီးယားတောင်, ကူဝိတ်, ကာဂျစ္စတန်, လာအို, လတ်, လက်ဘနွန်, လီဆိုသို, လိုက်ဘေးရီးယား, လစ်ဗျား, လစ်ချ်တင်စတိန်း, လစ်သူယေးနီးယား, လူဇင်ဘတ်, မကာအို, မက်ဆီဒိုးနီးယား, မဒါဂတ်စကာ, မော်လဝီ, မလေးရှား, မော်လဒိုက်, မာလီ, မော်လ, Isle Of Man, မာရှယ်ကျွန်းများ, မာတီနစ်, မော်ရီတေးနီးယား, မောရစ်သျှ, မာယော့, မက္ကဆီကို, မိုက်ခရိုနီးရှား, မော်လ်ဒိုဗာ, မိုနာကို, မွန်ဂိုလီးယား, Montserrat, မော်, မိုဇမ်ဘစ်, မြန်မာ, နမီးဘီးယား, Nauru, နီပေါ, နယ်သာလန် အန်တီ, နယ်သာလန်, နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား, နယူးဇီလန်, နီကာရာဂွာ, နိုင်ဂျာ, နိုင်ဂျီးရီးယား, Niue, Norfolk ကျွန်း, မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစုများ, နော်ဝေး, အိုမန်, ပါကစ္စတန်, ပလောင်, ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။, ပနားမား, ပါပူအာ နယူးဂီနီ, ပါရာဂွေး, ပီရူး, ဖိလစ်ပိုင်, ကိန်ကျွန်း, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ပွာတိုရီကို, ကာတာ, ပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်း။, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ရဝမ်ဒါ, စိန့်ဟယ်လီနာ, Saint Kitts နှင့် Nevis, စိန့်လူစီယာ, Saint Pierre နှင့် Miquelon, Saint Vincent နှင့် The Grenadines, ဆာမိုအာ, ဆန်မာရီနို, Sao Tome နှင့် Principe, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ဆီနီဂေါ, ဆားဗီးယား, ဆေးရှဲလ်, ဆီးရီးယားလီယွန်း, စင်္ကာပူ, ဆလိုဗက်ကီးယား, ဆလိုဗေးနီးယား, ယူကေ၏ သေးငယ်သော နယ်မြေများ, ဆော်လမွန်ကျွန်းများ, ဆိုမာလီယာ, တောင်အာဖရိက, တောင်ဂျော်ဂျီယာ, တောင်ဆူဒန်, စပိန်, သီရိလင်္ကာ, ဆူဒန်, ဆူရီနမ်, Svalbard နှင့် Jan Mayen ကျွန်းများ, ဆွာဇီလန်, ဆွီဒင်, ဆွစ်ဇာလန်, ဆီးရီးယား, ထိုင်ဝမ်, တာဂျစ်ကစ္စတန်, တန်ဇန်းနီးယား, ထိုင်း, သွားရန်, Tokelau, တွန်ဂါ, ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို, တူနီးရှား, ကြက်ဆင်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်, Turks And Caicos ကျွန်းစုများ, တူဗာလူ, ယူဂန်ဒါ, ယူကရိန်း, အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ယူအက်စ်, United States Minor Outlying ကျွန်းများ, ဥရုဂွေး, ဧကစ္စတန်, ဗာနူအာတူ, ဗာတီကန်စီးတီး (Holy See), ဗင်နီဇွဲလား, ဗီယက်နမ်, ဗာဂျင်ကျွန်းများ (ဗြိတိသျှ), ဗာဂျင်ကျွန်းစု (အမေရိကန်), Wallis နှင့် Futuna ကျွန်းများ, အနောက်ဆာဟာရ, ယီမင်, ယူဂိုဆလားဗီးယား, ဇမ်ဘီယာ, ဇင်ဘာဘွေ, Peshawar, Al Khurtum, Mawna Union
သင့်လိုအပ်ချက်အရ သေတ္တာများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ :- 09-08-2021
ကြွေပြားများကို Wale တွင်ရောင်းသည်။? ယခု စာရင်းသွင်းပါ။ !
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 375 mm (10 x 15 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
Art Tile LLP မှ ပုံစံတူထုတ်ကုန်
လေ့လာရန် & ပံ့ပိုးမှု
လျှောက်လွှာအလိုက် ကြွေပြားများ: ဝေါ ကြမ်းပြင် နံရံနှင့်ကြမ်းပြင် အဆင့် Riser
မျက်နှာပြင်အလိုက် ကြွေပြားများ : တောက်ပသော Matt ဖဲ သကြား ပွတ်သည်။ ကျေးတော Bookmatch ထွင်းထု High Glossy သတ္တု တလက်လက် ပိုး အမြင့် သစ်သား တကိုယ်လုံး ဂါလိချာ စကျင်ကျောက် 3D Matt အဖြူအမည်း မော်ရိုကို
ပစ္စည်းအလိုက် ကြွေပြားများ ကြွေ ဗီတာမင်စီ ဒစ်ဂျစ်တယ် Double Charge Glazed Vitrified ကြွေကိုယ်ထည် Vitrified ခန္ဓာကိုယ်
အရောင်အလိုက် ကြွေပြားများ : ကြက်သွေး အနီေရာင် လိမ္မော်သီး အဝါရောင် သံလွင် ခရမ်းရောင် ပန်းရောင် အဖြူ အစိမ်း ရေတပ် အပြာ Aqua စိမ်းပြာရောင် အနက်ရောင် ငွေ မီးခိုးရောင် အညို
ကြွေပြားအရည်အသွေးကြွေပြားများ တင်ပို့နည်းအိန္ဒိယကြွေပြားများ တင်သွင်းနည်းတရုတ်ကြွေပြားများ တင်သွင်းနည်းဗီယက်နမ်ကြွေပြားများ တင်သွင်းနည်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းအတွက် ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ
© 2018-2022, ITILESWALE PVT. LTD., မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
Tileswale သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။LLS India
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပံ့ပိုးမှု၊ စျေးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရွေးချယ်မှုများသည် သတိပေးချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။